Caafimaadka oo ka digey xanuuno
8 Nov 8, 2012 - 6:14:39 AM
Wasaarada Caafimaadka Puntland ayaa ka digtey xanuunada ka dhasha waxyaabo bulshadu badanaa isticmaasho oo dhibaatooyin u keeni kara.
Dr.Maxamed Xirsi Ducaale ku xigeenka wasiirka caafimaadka Puntland oo la hadlay Radio Garowe ayaa bulshada uga digey xanuunada ka dhasha Sonkorta ,Tubaakada ,Dufanka iyo Cusbada ama Milixda.
Shir ka dhacay dhowaan Xarunta Masar ee Qaahira ayaa arintan looga hadlayey ,waxana uu ka mid ahaa wasiirku dadkii ka qaybgalay shirkaasi isagoona sidoo kale ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay.
Dadweynaha ayuu Dr.Ducaale ugu baaqey inay yareeyaan istcmaalka waxyaabahan kor lagu soo xusey oo uu sheegey inay sababaan xanuuno.
Deegaanada Puntland ayaa la soo gabogabeynayaa guud ahaan maanta talaalka caruurta iyo hooyada dhalaanka ah oo lixda cudur ee dilaaga ah laga talaalayey olole balaaran oo socdey shan maalmood.
Halkan ka dhageyso Codka wasiir ku xigeenka Caafimaadka Puntland